Fihoaram-pefin'ny miaramila :: Maty voatifitra ilay lehilahy avy niady tamin’ny vadiny • AoRaha
Namoy ny ainy vokatry ny tifitra nahazo azy ny lehilahy iray mpihady volamena tany Antanimbary-Maevatanàna, afak’omaly hariva. Bala efatra no niditra teo amin’ny lohany, ny sorony, ny kibony ary ny tongony. Vata miaramila kilasy faharoa mpiambina tobimbolamena no nahavanon-doza, araka ny voalazan’ireo mpitandro filaminana, any an-toerana. “Efa nalefa nidina any an-toerana ny lehiben’ny Rezimanta miaramila fahefatra any Mahajanga”, hoy ny jeneraly Rabenaivoarivelo Jean Claude, lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika.
“Nisy fifamaliana teo amin’ ny mpivady iray trano. Naniraka nampiantso miaramila ilay vehivavy. Rehefa tonga ireo miaramila mpiambina tobim-bolamena dia nitifitra avy hatrany ny vata miaramila iray kilasy faharoa. Nampandre ny zandary miasa ao Antanimbary ny Ben’ny tanàna momba ny zava-nisy”, hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
Nandeha tany amin’ny toerana nisian’ny loza ireo zandary niaraka tamin’ny dokotera nijery ny razana. “Nisy olona nanatrimaso nitantara ny zava-misy tamin’ireo mpitandro filaminana. Nijery ny antony nahafaty ilay olona ny dokotera, ka teo no nahitana fa bala efatra no niditra tamin’ny vatany. Nomena ny fianakaviany ny razana taorian’izay”, araka ny fitantaran’ ireo mponina any an-toerana.
Fanindroany izao io miaramila nahavanon-doza io no voatonontonona tamin’ny vono olona toy izao tato anatin’ny telo herinandro izay, tany Maevatanàna. “Notorian’ny fianakaviana iray ihany koa io miaramila io, namono sy nandratra tamin’ ny vodim-basy ny lohan’ny lehilahy iray valopolo taona, tamin’izay. Naratra mafy ilay voavono ka naiditra hopitaly. Nitaraina ireo fianakavian’ilay naratra fa mbola nalain’io miaramila io an-keriny ny ombin’izy ireo miisa enina. Namidiny ireo omby dia lasany ny vola. Tsy afaka natao inona itsy miaramila itsy satria narovan’ny lehibeny sady tsy nisy ny taratasy fahazoana manenjika azy avy any amin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena”, hoy hatrany ny loharanom-baovao akaiky ny mpanao famotorana.
Manao antso amin’ny lehiben’ny miaramila ny mponina any Maevatanàna mba hijery akaiky ity raharaha ity. “Ahiana ho lasa mpamono olona ankitsirano tsy misy fitandroana ny zon’olombelona ny mpitandro filaminana”, hoy izy ireo.
Fandrobana vahiny :: Mpanafika mpizaha tany maty voatifitra